Augustin Andriamananoro : Mampanjaka ny gaboraraka -
AccueilSongandinaAugustin Andriamananoro : Mampanjaka ny gaboraraka
Augustin Andriamananoro : Mampanjaka ny gaboraraka
Namoaka fanambarana omaly ireo fiarahamonim-pirenena sy ny Transparency International, fa nisy ny fifanarahan’ny vondrona malagasy momba ny fampandrosoana ara-toekarana sy ny fampivoarana ny orinasa (AMDP), tamin’ny fivondronan’ireo mpampiasa vola sinoa Taihe Century Investments Developments Co. Ltd. Izany fifanarahana izany raha ny fanazavana nentin’ ireo fiarahamonim-pirenena, dia ny ahafahan’ireo sambo Sinoa manjono aty amin’ ny fari-dranomasin’ i Madagasikara. Hatreto aloha, tsy fantatra mazava anefa ny voatoatin’ io fifanarahana io, satria tsy mipaingotra tamin’ny fampitam-baovao voaray. Mahagaga ihany koa ny fanononan’ireo anivon’ny fiarahamonim-pirenena ny anaran’ny filoha nametra-pialana, nefa na dia ny votoatin’ny fifanarahana aza tsy fantatr’izy ireo akory fa mbola takiana. « Mangataka, araka izany, ireo fiarahamonim-pirenena manao sonia izao fanambarana izao mba: – Havoaka ampahibemaso sy amin’ny antsipirihany ho fantatry ny rehetra ireo andinindiny momba ny fifanarahan’ny AMDP sy ny Taihe Century Investments Developments Co.Ltd ».
Mampieritreritra ny famoaham-baovao tahaka izao, indrindra fa fotoana ankatoka fifidianana. Raha misy ny olana dia ny minisiteran’ny Jono no tokony hitondra fanazavana, saingy tsy nisy izany na dia azo lazaina aza fa minisitra mifanipaka foto-kevitra politika amin’ ny filoha nametra-pialana no eo amin’ny toerana amin’ izao. Misy tokoa ireo sambo sinoa mpanjono ireo, dia ny minisiteran’ ny Jono no tompon’antoka. Satria dia ao amin’ ny minisiteran’ny Fakana alalana, ary izy ireo mahafantatra tsara ireo sambo rehetra afaka manjono na tsia, amin’ny alalan’ny sampana fanaraha-maso ny jono. Efa tsy mahagaga firy ihany koa raha gaboraraka ny fanjonoana, satria dia efa nilaza ny teo anivon’ ny minisitera fa tsy manana sambo indostrialy isika Malagasy. Midika ve izany fa nanome alalana ireo mpanjono tsy ara-dalàna ny minisitera, satria dia tsy manana sambo isika. Ny haren-dranomasina rahateo, izay tsy ho very mihitsy, na andrasana ireo mpanjono madinika aza. Tsara ny mampatsiahy fa Malagasy hatrany amin’ ny 1 tapitrisa eo ho eo ny jono, nefa dia tsy mandray ny andraikiny ny minisitera.
Tsy mahagaga rahateo io tsy fandraisana andraikitra io, satria efa zatra tsy mpanara-dalàna loatra ny minisitra. Hany ka na efa milaza izao aza ny lalàna, hoe tsy azon’ny mpanatanteraka atao ny manatrika fampielezan-kevitra. Voaporofon’ny sary ny tsy firaharahiany ny lalàna, nefa dia hiantefa any amin’ny kandidà tohanany ny sazy.
Namoaka fanambarana mikasika ilay loza teny Ivandry ny praiminisitra Ntsay Christian. Tsy nisy fialan-tsiny na kely akory aza, loza aza mbola mihevitra ny tenany ho manana ny marina… Mivandravandra eo imasom-bahoaka tokoa ankehitriny ny toetran’ny ...Tohiny